गलत आरोप लगाउँदै कामको मुल्यांकन! :: स्वास्थ्यखबर :: स्वास्थ्य खबरपत्रिका
गलत आरोप लगाउँदै कामको मुल्यांकन!
स्वास्थ्यखबर शनिबार, माघ १५, २०७८, २०:२८:००
सर्वप्रथम ६० औं नर्सिङ दिवसको सबैमा शुभकामना। आज २०७८ माघ ईछ गते देशभर ६०औं नेपाल नर्सिङ दिवस भव्यरुपमा मनाई रहँदा मेरो कामको मूल्यांकन भने विभिन्न गलत आरोप लगाएर गरिएको छ। दिनरात सेवामा खटिए बापत प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा झन् उल्टै आरोप लगाउने काम भएका छन्।
गत २ हप्ता अगाडि कोभिड-१९ को तेस्रो लहरमा वीरअरस्पतालमा कोभिड संक्रमितको उपचार तथा व्यवस्थापनका लागि करारमा स्टाफ नर्स भर्ना लिइएको थियो। जसमा स्टाफ नर्स भर्ना गर्दा केही नर्सहरुको क्राइटेरिया पुगेके थिएन। तर यस अस्पतालमा कार्यरत केही कर्मचारीहरुले आर्थिक प्रलोभन तथा आफ्नो कुर्सी बचाउने हेतुले बिनियम विपरित तथा नर्सिङ पेशाको इथिक्स विरुद्धको काम गर्न खोजेपछि मैले त्यसका विरुद्धमा आवाज उठाएको थिएँ।
नर्सिङ पेशाको इथिक्स अनुसार काम हुनुपर्छ, नियम र कानुन अनुसार काम हुनुपर्छ भन्दा उल्टै मेरो चरित्र हत्या गर्ने काम भएको छ। यस्तो विषम परिस्थितिमा म अस्पताल व्यवस्थापनमा दिनरात नभनी आफ्नो कार्यकुशलताका साथ काम गरिरहेको अवस्थामा अस्पतालबाट मेरो कामको यसरी मूल्यांकन भएको छ। यसले मलाई दु:खी बनाएको छ।
मेरो बारेमा बाहिर जे जति हल्ला भएका छन् ती सबैको म खण्डन गर्दछु।
मैले २०७१ सालमा नै विद्यावारिधी (पिएचडी)को परीक्षा सकाएर मात्र २०७४ सालमा सरकारी सेवामा प्रवेश गरेको हुँ। नर्सिङमा के पढ्न नै नपाउने हो र!
मैले वीर अस्पतालमा के अनियमितता गरेँ तथा कसलाई करार नर्सको म्याद थप गर्दा पैसा मागेको छु?
कार्यालय समयमा कुन निजी कलेजमा पढाउन गएको छु?
निजी कलेजमध्ये कुन कलेजबाट आर्थिक कारोबार गरेँ?
आर्थिक करोबार गर्ने अधिकार निर्देशकमा रहेका कारण म माथि लगाइएको आरोप स्वत: खण्डन हुन्छन्।
त्यसकारण सबैमा म के अनुरोध गर्दछु भने मेरो बारेमा बाहिर जे जति हल्ला र आरोप लगाइएको छ ती सबैको म खण्डन गर्दै ती कुरामा विश्वास नगर्नुहोला।
डा रिना श्रेष्ठ
वरिष्ठ नर्सिङ प्रशासक वीर अस्पताल
सरकारले प्रत्येक वडामा सामुदायिक नर्सिङ सेवा उपलब्ध गराउने १९ मिनेट पहिले